မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Wedding Emcee လုပ်မယ်ဆိုရင်...
Posted by mabaydar at 5:20 AM
Thanks for sharing with your knowledge.Very useful.
Thanks so much for your effort at my wedding video montage.I am excited to watch your video clip. I know that will be fantastic..
MC လုပ်မဲ့လူတွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ အချက်အလက်လေးတွေပါဘဲ
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရေးသားဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်..
တို့လဲ ၀ါသနာပါတယ်..း)
Thanks for sharing, ur so smart
မနေ့က post ကိုဖျက်လိုက်တာလား။
လူတွေရဲ့ အမြင်အမျိူးမျိူး ကိုဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။
movie reviewေ​တွ​ထ​ပ်ေ​ရး​ပါ​အု​န်း။ဘာ​ဘဲေ​ရးေ​ရး
ဒီက tips လေးတွေအားကိုးနဲ့ မနေ့ကသူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်တော့ အောင်မြင်သွားတယ်.. ကျေးဇူးမဗေဒါ.. MC လဲ စားရပါတယ်.. ကိုယ်ပြောရတဲ့အချိန်တွေက ဟင်းပွဲမချပဲ နားထားတဲ့အချိန်တွေချည်းဆိုတော့ ဟင်းတမျိုးမှမလွန်လိုက်ဘူး.. မပူနဲ့.. :)
1/31/2011 1:31 PM
မနေ့ကပိုစ့်ဆိုတာ ဘယ်ပိုစ့်ကိုပြောတာလဲ မသိဘူး... ဘယ်ပိုစ့်မှ မဖျက်ထားပါဘူး..
ဟုတ်ကဲ့.. ရေးပါမယ်... movie review တွေရေးရင် ရှည်ပြီး ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ပင်ပန်းအချိ်န်ကုန်လို့ အပျင်းကြီးနေတာပါ...